अफगानिस्तानमा झन्डै एकतिहाइ मानिसमा कोरोनाको पुष्टि - नेपालबहस
अफगानिस्तानमा झन्डै एकतिहाइ मानिसमा कोरोनाको पुष्टि
| ११:०८:४१ मा प्रकाशित
२२ बैशाख, एजेन्सी । अफगानिस्तानको स्वास्थ्य मन्त्रालयले राजधानी काबुलमा परीक्षण गरिएका नमुनामध्ये झन्डै एकतिहाइमा कोरोना भाइरस भेटिएको पुष्टि गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार ५०० जनाबाट सङ्कलित नमुना परीक्षण गर्दा डेढ सयभन्दा बढीमा सङ्क्रमण भेटिएको हो। उक्त परिणामले सुरुमा सोचेभन्दा तीव्र रूपमा काबुलमा प्रकोप विस्तार भइरहेको हुन सक्ने कुराले काबुलका ४० लाख बासिन्दामा चिन्ता बढाइदिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा सङ्क्रमणको अवस्था कस्तो छ भन्ने अहिलेसम्म स्पष्ट नभएको समाचार एजेन्सीले जानकारी दिएका छन् ।
केही महिनाअघि झन्डै अढाइ लाख अफगानीहरू प्रकोपको चर्को मारमा परेको देश इरानबाट फर्किएका थिए अफगानिस्तानमा अहिलेसम्म २,७०० जना सङ्क्रमित भएको पुष्टि भएको छ भने ८५ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले भाइरस विस्तार रोक्न राजधानी काबुलका बासिन्दालाई घरभित्रै रहन भनिएको बीबीसीले जनाएकाे छ । अफगानिस्तान लामो द्वन्द्वले थिलथिलो भएको देश हो। त्यसैले त्यहाँको स्वास्थ्य प्रणालीले ठूलो महामारीको सामना गर्न नसक्ने ठानिन्छ।
विशेषज्ञहरूले सङ्क्रमण अचानक ठूलो मात्रामा फैलिएमा त्यसले अफगानिस्तानको कमजोर स्वास्थ्य प्रणालीलाई तुरुन्तै निष्प्रभावी तुल्याइदिने चेतावनी दिएका छन्।
अन्तराष्ट्रिय सहायताको आग्रह
अफगानिस्तानमा पहिलो सङ्क्रमण इरानसँग सीमा जोडिएको हेरात प्रान्तमा फेब्रुअरी महिनाको अन्त्यतिर पुष्टि भएको थियो। एप्रिल महिनामा राष्ट्रपतिको कार्यालयमा कार्यरत केही दर्जन कर्मचारी कोरोना भाइरसबाट सङ्क्रमित भएको समाचार आएको थियो।
सरकारले त्यसबारे कुनै टिप्पणी गरेको छैन। सेभ द चिल्ड्रनले कोरोना भाइरस सङ्कटका कारण खानेकुराको मूल्य निकै बढेपछि अफगानिस्तानमा ७० लाखभन्दा धेरै बालबालिका भोकमरीको जोखिममा रहेको चेतावनी केही दिनअघि दिएको थियो।
लकडाउनका कारण आपूर्ति व्यवस्थामा बाधा उत्पन्न भएपछि खाद्यपदार्थको मूल्य बढेको हो। सहायता संस्थाहरूले तत्काल अन्तराष्ट्रिय सहयोग गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। उनीहरूका अनुसार अफगानिस्तानमा महामारीको सबैभन्दा ठूलो प्रभावको कारण भाइरस नभई भोकमरी हुन सक्छ।
बसले एम्बुलेन्सलाई ठक्कर दिँदा चालकको मृत्यु ६ दिन पहिले
तास खेलिरहेको अवस्थामा ५ जना पक्राउ ४ हप्ता पहिले
आईपीएल: केकेआर र हैदराबादको म्याचमा कसले मार्ला बाजी ? २ हप्ता पहिले
प्रचण्ड– नेपालको आन्दोलनमा योगेश–घनश्यामहरु कता वेपत्ता ? २ महिना पहिले
आज मन्त्रीपरिषदको आकस्मिक बैठक बस्दै १ वर्ष पहिले
प्रचण्डले फेरि आलोपालो सरकारको सहमति ब्युताउँदा ओली त्रसित ! १० महिना पहिले